E-mail ကို: jean@kinwah-group.com
ဖဲဖဲကြိုး / တံဆိပ်ဖဲကြိုးစဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးစက်
လောက်လွှဲ webbings / ကြိုး / မျက်တောင်ကြိုး / မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် webbings ချချည်နှောင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးစက်
အိတ်ခါးပတ် / ခရီးဆောင်သေတ္တာ webbings စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးစက်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး webbings / ကြိုး webbings စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးစက်
မော်တော်ယာဉ်နဲ့ခါးပတ် webbings စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးစက်
အထည်ချုပ်တံဆိပ်များ / စောင့်ရှောက်မှုတံဆိပ်များ / အဝတ်အစားတံဆိပ်များပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်
Lashing ကြိုး / ကြိုးချချည်နှောင် / မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် webbings ပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်
တံဆိပ်ဖဲကြိုး / ဖဲဖဲကြိုး / lanyard ဖဲကြိုးပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်
လက်ဆောင်ပေးမယ်ဖဲကြိုး / ဖဲဖဲကြိုးပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်
ပေရုပ်ရှင် / ခေါင်းကိုရုပ်ရှင် / ဖိနပ်ကြိုးကိုပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်
လူပျိုအရောင် / ရောင်စုံဖန်သားပြင်ပုံနှိပ်စက်
အိတ်ခါးပတ် / အိတ် webbings ပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်
elastic တိပ်ခွေ pre-ကျုံ့စက်
ကျဉ်းမြောင်းသောထည် startching နှင့်ပြီးစက်
မြန်နှုန်းမြင့် polyester အိတ်ခါးပတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုး ...
elastic တိပ်ခွေအလိုအလျှောက်ဆီလီကွန်အပေါ်ယံပိုင်းစက်ကျေး ...
အကောင်းဆုံး polyester အိတ်ခါးပတ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးခြင်းနှင့် fi ...
ဥရောပ Standrd webbings စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးနဲ့ခါးပတ် ...
ဥရောပ Standrd နိုင်လွန် elastic တိပ်ခွေစဉ်ဆက်မပြတ် dyei ...
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ဖဲဖဲကြိုးတံဆိပ်ဖဲကြိုး continuous ...
webbings ချချည်နှောင်အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက် ...
စက် wi slitting high အကျိုးရှိစွာ ultrasonic တံဆိပ်များ ...
အဝတ်အစားတံဆိပ်များအီး Cert နှင့်အတူပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင် ...
နှစ်ချက်နှစ်ဖက်ဝါဂွမ်းတိပ်ခွေပုံနှိပ်စက် su ပြ ...
5 အရောင်များဖဲ Ribbon အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်လှိမ့်ပုံမှလှိမ့်ပုံ ...
2 ဆလင်ဒါ elastic တိပ်ခွေ starching နှင့် ma ပြီး ...
အမြင့်အကျိုးရှိစွာမိုးသည်းထန်စွာတာဝန် webbings စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုး ...
မော်ဒယ်မ .: DPS-3000-F ကို
Driven အမျိုးအစား: လျှပ်စစ်
phase:3အဆင့်
ဗို့: 220/380 / 400V
လျှောက်လွှာ: သင်္ခါရ, ချုံ့ရန်အထည်အလိပ် Roll ပစ္စည်းများ, လဲမှို့တိပ်
ပို့ဆောင်ရေးအထုပ်: သစ်သား Box ကို
HS Code ကို: 8443191000
ဒီစက်အထည်ချုပ်တံဆိပ်, ဖဲကြိုး, lanyards, elastic စသည်တို့လိပ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးအလွန်လွယ်ကူစွာမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစက်နှင့်အတူ, သင်တဦးတည်းအချိန်မရွေးနေမှုကိုချေဖျက်ပုံမှန်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သတ္တုပါးကို process နိုင်ပါတယ်။
အရာဝတ္ထု၏ ADescription: အပြီးအစီးထားသတ္တုပါးနေမှုကိုချေဖျက်စက်
CAppication: ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ဝါဂွမ်းတိပ်ခွေ, elastic တိပ်ခွေ, ဖဲဖဲကြိုး, တံဆိပ်ဖဲကြိုးနှင့်ဒါမှအပေါ် 1mm ထူအတွင်းအဖြစ်အလိပ်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးတို့ကိုများအတွက်အသုံးပြုသည်။
DOutput စွမ်းဆောင်ရည်: 0-20meter / ဖဲကြိုး / မိနစ်, ခါးပတ်အရေအတွက်: 1-10PCS အခါတိုင်း။
EPower စားသုံးမှု: 2KW / နာရီ
FMaximum အပူချိန်: 280 စင်တီဂရိတ်, ကချိန်ညှိပါတယ်။
G. အ M က Achin Size: 1250mm (L ကို) * 850mm (W) * 1450mm * (H)
Youtube ကို: https://youtu.be/AzCl4HhDlKY
အများအပြားသည်ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးနှင့်ကျော်ကြားသောကျဉ်းမြောင်းသောအထည်ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူပူးပေါင်းရေရှည်အတူ recogonized ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်တွေ, Dopsing, Shore / ITL ဖို့ထိုကဲ့သို့သော PAXAR / Avery-DENISSION / SML / ESQUEL / Shore အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်တွေကိုအသုံးပြုနေသည် ဒါကြောင့်အပေါ် elastic တိပ်ခွေထုတ်လုပ်သူ STRETCHLINE နှင့်။
DOPSING Machinery Co. , Ltd မှကျဉ်းမြောင်းသောထည်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံသည်အဆိုပါနည်းပညာအသင်းထက်ပိုမို 12 နှစ်ဒီဇိုင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု experience.The နယူးအမျိုးအစားမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်မျက်နှာပြင်ဖဲကြိုး & တံဆိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းလှိမ့်ပုံ 10 patents.We ထောက်ပံ့ရေးအော်တို Roll ကျော်ရရှိထားသူပါပြီ စက်နှင့် mini မြင့်အပူချိန်ဖဲကြိုးဖန်သားပြင်ပရင်တာ, အားလုံးထည်တံဆိပ်နှင့်ဖဲကြိုးမျက်နှာပြင် printing.As ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျဉ်းမြောင်းထည်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်ထုတ်လုပ်သူအဘို့ ဖြစ်. , ကျနော်တို့အများကြီး Oversea မိတ်ဖက်အတူတကွစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရှိသည်။ ထိုသို့သော Shore / ITL / FINOTEX / MAHEEN LABEL / DEKKO / LONGRIVER စသည်တို့ကို TO သို့ STRETCHLINE / PAXAR / Avery-DENISSION / SML / ESQUEL / Shore အဖြစ်
2011, DOPSING ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျဉ်းမြောင်းထည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆေးဆိုးသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစက်ထုတ်လုပ်သူ Dongguan စီးတီး Kin ဝါး Machinery Co. , ပြီး, Ltd.And သို့ပြောင်းရွှေ့
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးဆဲသုတေသနပြုအလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပရင်တာကုန်ထုတ်လုပ်မှုထက်ပို 2000 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးအုပ် KINWAH စက်မှုပန်းခြံ, ။
ယခင်: ယက်တံဆိပ် / Lanyards အလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်
နောက်တစ်ခု: EUR နျ Standard အိမ်အိမ်မွေးခါးပတ်ဆက်တိုက်ဆေးဆိုးစက်
လက် Bag B ကိုအဘို့အစက်နေမှုကိုချေဖျက်ဖဲကြိုးဟော့သတ္တု ...
မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဟော့သတ္တုတံဆိပ်ထုစက် (DPS -...
အမြင့် Temp ဟော့သတ္တုတံဆိပ်ထုစက် DPS-3000
လက်ဆောင်ပေးမယ် Ribbon DPS များအတွက်ပူသတ္တုတံဆိပ်ထုစက် -...
ဖဲကြိုး DPS-3000-F များအတွက်ပူသတ္တုတံဆိပ်ထုစက်
လက်ဆောင်ပေးမယ် Decoration များအတွက်ဖဲကြိုးဟော့တံဆိပ်ထုစက် ...
Adress: No.83 Huanbao လမ်း, Yisha ခရိုင်, Shatian မြို့, Dongguan စီးတီး, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
Skype ကို: + 86-13829220085